umatshini wokusika udizili isando umatshini wokusika isitshizi isixhobo somatshini
Umsiki womququ wezolimo kunye nesando somatshini usetyenziselwa ukusika ingca / isilage kunye nokugaya ingqolowa,esisixhobo somatshini wokusika ingca eluhlaza okanye eyomileyo yengca,umqhaphu wekotoni, ishiya yesoya,ingca kunye ne-hay njl njl iziqwenga ezincinci ngaphambi kokuba zidityaniswe kunye nezinye iifreyiti kwaye zondliwe kwizilwanyana. Umsiki wamakhoba kunye nomatshini wokugaya unceda ukugaya izilwanyana kwaye uthintele nezilwanyana ukuba zingamkeli nayiphi na indawo yokutya kwazo.
Ukusetyenziswa kwenqanawa yokusika isando somatshini
Umatshini wokusika umququ womsonto udityaniswe nemisebenzi emibini, Isiqu sombona ,ingca yerayisi, ingca yengqolowa ,isiqu sembotyi, ingca eluhlaza ,isiqu sobusi njl ,ngomthamo omkhulu. Umatshini wokusika umhluzi unokusetyenziselwa umbona,ingqolowa,Ukugaya umbona njl.njl,ifama,ngumlimi owalusa inkomo, ihashe, igusha, Ixhama, urabi njl.
Inzuzo yomatshini wokucheba umququ womququ
1.Ubungakanani bokusika ingca bunokutshintshwa,ubude buyi 9 mm,12mm,18 mm,30 mm
2.Umatshini wokucheba umsantsa wesando ungatshayelwa ngumbane wombane,Injini yedizili kunye nenjini yegesi. Sinamandla macthed kunye nevili ngokuxhomekeke kubathengi’ ibango ,okanye ungathenga i-motor okanye injini kwimarike yakho yasekhaya singakulungiselela isithuthi okanye i-injini isiseko sesithuthi.
3.Umthamo ophakamileyo wezibuko lokutya,Uluhlu olude lokukhupha umququ,Umthamo ophezulu wokubumbeka kwesileyi yombona.chaff isisulu yomgubo wokugaya isayizi encinci,uyilo lwensimbi edibeneyo, ubunzima bokuzinza okusebenzayo.
4.Ibala le-chris cutter grinder yenziwa ngentsimbi esemgangathweni, evuselelwa yinkqubo ekhethekileyo kwaye inamandla okumelana nezinto ezinamandla.Iibhowuli zamandla amakhulu zisetyenziselwa ukhuseleko kunye nokuthembeka.
5.Umatshini wokusika umatshini we-diesel christ umatshini wokugaya uqweqwe ngesinyithi ngesinyithi rhoqo, kwaye konke ukubumba kuyenziwa, mhle kwaye unesisa, kwaye yomelele.
6.umatshini wokusika umququ wenqanawa unesakhelo sesinyithi, umthamo omncinci, ubunzima bokukhanya, ilula ukuhambisa.Safe kwaye ithembekile kuyilo lwesixhobo esikhuselekileyo, ukuphelisa ukuhlafuna ngengozi yommese.
7.Umsiki-mququ wamanqunqele kunye nomatshini wokukhulisa unexabiso eliphantsi lokuthengisa kodwa ungowona mgangatho uphambili kwaye uthembekile emva koncedo lwenkonzo yokuthengisa .
Iiparamitha zobugcisa kumatshini we-christ cutter grinder
Ingca eyomileyo 500 ~ 600
Ingca emanzi 800 ~ 1000
Ingca eyomileyo 1000 ~ 1200
Ingca ebanzi 1500 ~ 2000